Horyaalada kubada cagta Yurub oo ay soo foodsaareen caqabado inay bilowdaan – SBC
Horyaalada kubada cagta Yurub oo ay soo foodsaareen caqabado inay bilowdaan
Posted by editor on Agoosto 11, 2011 Comments
Horyaalada Qaarada Yurub ee kubada cagta ayaa la soo sheegayaa inay soo wajaaheen caqabado xoogan oo ay dhici karto inaanay sidii qorshuhu ahaa u bilaaban labada todobaad ee fooda inagu soo haya.
Horyaalka England (English Premiership)
Horyaalka Ingiriiska oo lagu wado in uu bilowdo maalinta sabtida ee soo socota ayaa la filayn in kooxuhu dhamaan wada ciyaaraan taasi oo ay ugu wacan tahay rabshadihii ba’anaa ee ka dhacay magaalooyinka Ingiriiska ka dib markii kooxo rabshad wadayaal ah ay boob & bililiqo xoogan ka geysteen magaalooyinkaasi.
Horyaalka Premiership-ka, horyaalada heerka 2 aad & sadexaad ayaa goor sii horeysba waxay la kulmeen hakad gaar ahaan kuwii ka dhici lahaa todobaadkan magaalada London oo ay rabshaduhu ruxeen.
War goor dhweyd ka soo baxay xiriirka ciyaaraha kubada cagta Ingiriiska ee loo yaqaan FA waxaa lagu shaaciyey in ciyaarta Tottenham ay gurigeeda ku marti galin laheyd kooxda Everton gabi ahaanba la baajiyey taasi oo ay ugu wacan tahay rabshadihii ka dhacay xaafada Tottenham oo lagu burburshay xafiiska Tigidhada garoonka kooxda Tottenham ee White Hart Line.
Si kastaba ha ahaateen FA-du waxay sheegeen in dhamaan 9-ka ciyaarood ee kale ay dhici doonaan ka dib markii ay ka heleen xaqiijin amaanka ah ciidamada Booliiska England.
Horyaalka Spain (La Liga)
Horyaalka Spain ayaa laga cabsi qabaa in gabi ahaanba aan la ciyaarin labada todobaad ee ugu horeysa, iyadoo sidoo kale horyaalka heerka labaad isna la filayo in uu hakad ku yimaado.
Arimahan ayaa ku aadan ka dib markii ururka ciyaarta dalkaasi ee loo yaqaan AFE ay sheegeen in ciyaartada heerka heerarka 1-aad & 2-aad ay ku dhaqaaqi doonaan shaqo joojin ay kaga cabanayaan mushaaraadka & heshiisyada ay kula jiraan kooxaha.
Madaxweynaha ururka ciyaartoyda AFE Luis Rubiales wuxuu sheegay in dhamaan ciyaartoydu u diyaar yihiin inay shaqo joojin ku dhaqaaqaaan isagoo xusey in ay doonayaan in heshiis la meel dhigaan ururka ciyaaraha Spain ee LFP.
Ciyaartoyda ayaa doonaysa in dhamaan kooxuhu ay mushaaraadka iyo heshiiska ciyaaryahanada sida uu yahay u fuliyaan, isla markaana hadii kooxuhu galaan heerka labaad ama ay dhaqaalo daro ku dhacdo oo ay masilifaan ay sida ay tahay u bixiyaan mushaaraadka ciyaaryahanada.
Sidoo kale waxay ciyaaryahanadu ku doodyaan in dhamaan ciyaartoyda loola dhaqmo si isku mid ah oo aan loo kala qiimeyn kooxaha ay ka tirsan yihiin.
Horyaalada heerka koowaad ee labaad ee Spain ayaa la filayey inay bilowdaan 20 & 21-ka bishan August.
Ururka ciyaartoyda ee AFE wuxuu shir ku qabtey Hotel ku yaal magaalada Madrid waxaana ka soo qayb galey in ka badan 100 ciyaartoy oo si aad ah u ayidsanaa go’aanka shaqo joojinta, waxaana ka dhex muuqdey ciyaartoydaasi goolhayaha & Captain-ka kooxda Real Madrid Iker Casillas & waliba Captain-ka & difaaca kooxda Barcelona Carles Puyol.
Kooxaha Spain ayaa qaarkood waxaa la soo daristey dhaqaalo xumo iyadoo sanadkii hore kooxda Real Mallorca ay uga hartey ka qayb galka koobka Euro League dhaqaalo xumo, sidoo kale kooxda Hercules ay bixin waydey mushaaradka mid ka mid ah ciyaartooydooda.
Horyaalka Talyaaniga (Sera A)
Xiriirka ciyaartoyda Talyaaniga ayaa isaguna ku hanjabay in ay ciyaartoydu ku dhaqaaqi doonaan shaqo joojin oo aanay safan doonin ciyaaraaha Sera A hadii aan si buuxda loo saxiixin heshiisyada ilaalinta xuquuqda ciyaartoyda, arintaasi oo wal wal baahsan keentey.
Agoosto 11, 2011 at 9:00 pm
shirka la iclaanshay in lagu qaban doono muqdisho
Noofember 14, 2011 at 6:53 pm
adeeraw dan tiina qabsada oo ilaahay caabuda in taad waxan ka sheekaynaysaan waa la is xisaa binayaaye